တော်ဝင် Challengers ဘန်ဂလို IPL 2021: အသင်းအပြောင်းအလဲများနှင့်စာရင်း
Bangalore သည်အစောပိုင်းကာလတွင် Karnataka ပြည်နယ်ကိုကိုယ်စားပြုသည် တော်ဝင် Challengers ဘန်ဂလို။ အဆိုပါအဖွဲ့သည်၏ပူကဏ္ sections တစ်ခုဖြစ်သည် အိန္ဒိယပရီးမီးယားလိဂ် ဒါပေမယ့်ကံမကောင်းတာကအတိတ်က IPL ဆုဖလားတွေကိုသိမ်းဆည်းမထားခဲ့ပါဘူး။ သို့သော် Virat Kohli၊ AB de Villiers နှင့် Yuzi Chahal တို့ကဲ့သို့သောဒဏ္playersာရီကစားသမားများရှိနေခြင်းကြောင့်အသင်းမှပရိသတ်များမျှော်လင့်ချက်မှာထင်ရှားသည်။
အဆိုပါအဖွဲ့သည်ကြီးမားသောပရိသတ်အခြေစိုက်စခန်းရှိပြီး၎င်းတို့၏ပရိသတ်များအတွက်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုရှိနေသေးသည်။ သို့သော် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်မီးမောင်းထိုးပြခြင်းသည်အသင်း၏စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်တွင်မူတည်ပြီးကောင်းမွန်စွာစွမ်းဆောင်နိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်မှာအသင်း၏အသေးစိတ်ပြိုကွဲမှုဖြစ်ပါတယ် တော်ဝင် Challengers ဘန်ဂလို။ စိတ် ၀ င်စားပါကခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုသည်အချက်အလက်များနှင့်အစီရင်ခံစာများအပေါ် အခြေခံ၍ သာပြုလုပ်သောကြောင့်အခွန်အခများကိုအလဟ without မဖြုန်းဘဲစတင်ရန်ကြစို့။
နာမည် တော်ဝင် Challengers ဘန်ဂလို တစ် ဦး အရက်အမှတ်တံဆိပ်ပြီးနောက်အမည်ရှိခဲ့သည်။ အဖွဲ့သည် IPL ၏မည်သည့်ခေါင်းစဉ်ကိုမှအနိုင်မရခဲ့သော်လည်းဖိုင်နယ်လ်ပွဲစဉ်၌အပြင်းအထန်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည်။ အိုင်ယာလန်၏သမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးတွင်အမြင့်ဆုံးရမှတ်နှင့်နိမ့်ဆုံးရမှတ်ကိုဤအသင်းမှသာရရှိသည်။ ဗီဂျေး Mallya သည် တော်ဝင် Challengers ဘန်ဂလိုပိုင်ရှင်ယူနိုက်တက် ၀ ိညာဉ်များသည်အသင်းကိုထင်ရှားသောအကြောင်းပြချက်အချို့ဖြင့်ကိုင်တွယ်ခဲ့သည်။ အုပ်စုတွင် Virat Kohli၊ AB Devilliers နှင့်လူငယ်အခွက်များကဲ့သို့သောအချိန်ကုန်ဆုံးကစားသမားများထဲတွင်ပါဝင်သည်။
အစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း, အမြင့်ဆုံးရမှတ် IPL သမိုင်းကြောင်း, 263 ဖြစ်သော, ဒီအသင်းကသွင်းယူခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အဖွဲ့၏တိုက်ခိုက်မှုအလားအလာကိုအလိုအလျောက်ဖော်ပြသည်။ The 2021 လေလံ အသင်းအတွက်အဆင်ပြေစွာသွားနိုင်ခဲ့ပြီးသူတို့၏လက်ရှိပုံစံကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားကာပြည်ပနှင့်ပြည်တွင်းအသေအပျောက်အများဆုံးဖြစ်သည့် batsmen အချို့ကိုစုဆောင်းခဲ့သည်။ ကျွမ်းကျင်သောလေ့လာသုံးသပ်သူများနှင့်သုတေသီများမှကစားသမားများဖြစ်သော Devdutt Padikkal နှင့် Joshua Philippe တို့သည်အသင်းတွင်အပြုသဘောဆောင်သောရလဒ်များထွက်ပေါ်လာမည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
IPL လေလံပွဲ၏အရေးကြီးဆုံးအချက်မှာ Glenn Maxwell ဖြစ်သည်။ အဆိုပါကစားသမားဘိုးလင်းနှင့်ရိုက်နှစ် ဦး စလုံးအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အလားအလာရှိပါတယ်။ မက်စ်ဝဲလ်၏ပုံစံကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်သူ၏ပါဝင်မှုသည်ထူးခြားသောသဘောတူညီမှုဖြစ်သည် တော်ဝင် Challengers ဘန်ဂလိုကစားသမား။ အဓိကရိုက်နှက်ထားသောအဖွဲ့များအပြင် ၀ ါရှင်တန်ဆန်းဒါး၊ ဒန်နီယဲလ်ဆမ်နှင့်ဟာရှယ်လ်ပါတယ်တို့ကဲ့သို့ကစားသမားအားလုံးသည်ပွဲကို ဦး ဆောင်ရန်စွမ်းရည်များစွာရှိသည်။ ခရစ်ကက်ကစားသူများသည်ဝါရှင်တန် Sundar ၏အတိတ်ကစမ်းသပ်မှုနှင့် RCB ပရိသတ်များအတွက်အပြုသဘောဆောင်သည့် T-20 စီးရီးများနှင့်အကျွမ်းတဝင်ရှိနိုင်သည်။
Virat Kohli, Navdeep Saini, Yuzvendra Chahal, Devdutt Padikkal, Mohammed Siraj, Sachin ကလေး၊ Shahbaz Ahmad, Rajat Patidar, KS Bharat, Harshal Patel, Prabhu Desai, Pavan Deshpande, AB de Villiers, Kane Richardson, Washington Kundar, Adam Kampa, Adam Zampa Jamieson၊ ဒန်ခရစ်ယာန်၊ ဒန်နီယယ်ဆမ်၊ ယောရှုဖိလစ်၊ ဂလင်းမက်စ်ဝဲလ်။
အခွင့်အလမ်းတွေကိုလျော့နည်းစေသည့်တစ်ခုတည်းသောအချက် တော်ဝင် Challengers ဘန်ဂလို အနိုင်ရဖြစ်ရပ်များအားနည်းဘိုးလင်းယူနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ တော်ဝင်စိန်ခေါ်သူများ၏ဘိုးလင်းတိုက်ခိုက်မှုသည်တိုက်ခိုက်မှုပုံစံနှင့်မတူသည်မှာအနည်းငယ်အားနည်းသည်။ Mohamad Siraj ကဲ့သို့အစာရှောင်သူများသည်နောက်ရာသီတွင်စျေးကြီးသည်။ သို့တိုင်ကစားသမား၏စွမ်းဆောင်ချက်သည်စမ်းသပ်မှုစီးရီးတွင်အတော်လေးကောင်းမွန်ခဲ့ပြီးပြန်လည်ပုံစံဖြင့်ပြန်လာသည်။ တစ်ခုတည်းသောဆုတ်ယုတ်မှုမှာ Kylie Jamieson သည်အိန္ဒိယလယ်ကွင်းများကိုတစ်ခါမျှမကြုံဖူးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
Navdeep Saini သည်မြန်ဆန်သောဘောလုံးပစ်သူဖြစ်ပြီး IPL ၏ဒူဘိုင်းအစည်းအဝေးများတွင်ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ Kane Richardson, Dan Christian နှင့် Daniel Sams ကဲ့သို့သောကစားသမားများသည်အတွေ့အကြုံနည်းပါးသည် IPL ကိုက်ညီသည် သူတို့ IPL မှာကစားခြင်း၏အတိတ်ကာလအခွင့်အလမ်းတွေကိုမရကြဘူးအဖြစ်။
သို့သော်ဘောလုံးပစ်သူအားလုံးသည်ကြီးမားသောအလားအလာများရှိပြီးကစားသမားအားလုံးနီးပါးသည်လက်ရှိအနေအထားတွင်ရှိနေသည်။ ကစားသမားတွေဟာသူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကိုမြှင့်တင်တယ်ဆိုရင်၊ တော်ဝင် Challengers ဘန်ဂလိုနည်းပြများ ဒီအချိန်မှတ်တမ်းများကိုတင်ထားလိမ့်မယ်။
လျင်မြန်သောဘောလုံးပစ်စက်နှင့်မတူသည်မှာလှည့်ဖျားသည်အနည်းငယ်အတွေ့အကြုံရှိပြီးခိုင်မာသည်။ Yuzvendra Chahal အသင်း၏ ဦး ဆောင်သူသည်အတိတ်တွင်အံ့ဖွယ်အမှုများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအနည်းငယ်သောသူများအတွက် ဦး ဆောင်သည့်ကက်တာဘွဲ့ကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ IPL အစည်းအဝေးများ ခရမ်းရောင် ဦး ထုပ်ပိုင်ဆိုင်ခြင်းဖြင့်။ တိကျစွာလည်ပတ်နိုင်သည့် ၀ ါရှင်တန်ဆန်းဒါ၏တည်ရှိမှုသည်လည်ပတ်ဘိုးလင်းကွင်း၏အားသာချက်ကိုအာမခံသည်။
Glenn Maxwell - ဒီတစ်ယောက်တည်းဖကျြဆီးခွငျး
Glenn Maxwell သည်အချိန်ကုန်ဆုံးသောအသေအပျောက်အများဆုံးကစားသမားများထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပြီးပွဲများကိုအောင်ပွဲများသို့ ဦး ဆောင်နိုင်သည့်အလားအလာရှိသည်။ ၂၀၁၄ IPL ရာသီကို Glenn Maxwell ၏ဖျော်ဖြေမှုအပြီးအမည်ပေးခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်၌တည်၏ 2020 IPL, Glenn Maxwell ပင်ကာလအနည်းငယ်ဂိုးသွင်းဖို့စိတ်ဆင်းရဲပျက်ကွက်။ ကစားသမားများလေလံတင်ရောင်းချမှုသည် ၁၄.၂၅ ကုcroေဖြင့် Chriss Morris ပြီးလျှင်ဒုတိယတန်ဖိုးအမြင့်ဆုံးကစားသမားဖြစ်သည်။
အဆိုပါကစားသမားသည်ကစားသမား ၁၅ ယောက်အားအိန္ဒိယပုရစ်အသင်းသို့အကြိမ်ပေါင်းများစွာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအချိန်နှင့်တပြေးညီပွဲများတွင်အခွင့်အလမ်းမရခဲ့ပေ။ ဤသည်ကစားသမားအတွက်ပြိုင်ပွဲအတွက်ထွန်းလင်းနှင့်အိန္ဒိယပုရစ်အသင်းရွေးချယ်သူများ၏ရှေ့မှောက်၌အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဂုဏ်သတင်းကိုဖွဲ့စည်းရန်အဘို့အအကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးမီအချိန်များအတွင်းမည်သည့်ပွဲတွင်မဆိုရှုံးနိမ့်ခဲ့သည့်ဗိုင်းရတ်ကဲ့သို့သောကပ္ပတိန်ကြီး၏ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင် KS Bharat သည်ကြီးမားသောသဘောတူညီမှုရရှိလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်တပ်မှူးဗိုင်းရတ်ကောလီ တော်ဝင် Challengers ဘန်ဂလိုအသင်း 2021 ကစားသမား၏စွမ်းရည်ကိုပိုမိုထိရောက်စွာစစ်ဆေးနိုင်လိမ့်မည်။
Harshal Patel က
ဒေလီမြို့တော်များ၌ cameo ဖျော်ဖြေပြီးနောက် Harshal Patel ကထိုအရာကိုပြုလုပ်ခဲ့သည် ဘန်ဂလိုအသင်း၏တော်ဝင်စိန်ခေါ်သူများ။ အဆိုပါကစားသမား Hardik Pandya ကဲ့သို့တူညီသောကျွမ်းကျင်မှုရှိပါတယ်။ ကစားသမားသည်လိုင်းအလျားနှင့်အရှည်ဖြင့်အလယ်အလတ်အရှိန်ဖြင့်ကစားနိုင်သည်။ တစ်ခုတည်းသောအရာ Harshal Patel က မရှိခြင်းသည်နိုင်ငံတကာကစားသမားများနှင့်ထိတွေ့မှုဖြစ်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောအသင်းများကိုအားလုံး - rounders ၏ပဒေသာဤအထူးသဖြင့်ယခုအချိန်တွင်မထိုက်မတန်, ဤကစားသမားမိမိကိုမိမိအပေါ်တစ် ဦး မီးမောင်းထိုး fix နှင့်ပြိုင်ပွဲကျောက်ဖို့ကြီးမြတ်နိုင်ပါတယ်။
တစ်အတိုချုပ်ထဲမှာ, အ တော်ဝင် Challengers ဘန်ဂလို Shivam Dubey, Chris Morris, Aaron Finch နှင့်အခြားသူများကဲ့သို့သောစွမ်းဆောင်ရည်မပြည့်ဝသည့်ကစားသမားအများစုကိုထုတ်ပယ်ခြင်းဖြင့်ကစားသမားကိုအပြောင်းအလဲများစွာပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဖြည့်စွက်မှုအသစ်များနှင့်အသင်းတစ်ခုလုံးသည်သူတို့၏မျှော်လင့်ချက်များနှင့်အလားအလာနှင့်အညီနေထိုင်ပါက၊ တော်ဝင် Challengers ဘန်ဂလို အတွက်အံ့ဘွယ်သောအမှုပြုနိုင်သည် 2021 IPL session တစ်ခု.
ကိုလ်ကတ္တား Knight Riders - ၂၀၂၁ ခုနှစ်အဖွဲ့အကြောင်းအသေးစိတ်လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း
Rajasthan Royals - ဤ IPL အဖွဲ့အကြောင်းအသေးစိတ်သုံးသပ်ခြင်း! 13.03.2021
Sunrisers Hyderabad - IPL အဖွဲ့အကြောင်းရှင်းပြထားသောရှင်းလင်းချက် 12.03.2021